Madaxweyne Farmaajo: “abaalkey Jabuuti noo gashay waan gudi doonnaa.” | Hohad News
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa soo gabagabeeyay booqashadii labada maalmood ahayd ee uu ku yimid magaalada Muqdisho kaddib martiqaad uu ka helay Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Image captionSafaaradda cusub ee ay Jabuuti ka dhisatay magaalada Muqdisho
Lahaanshaha sawirkaVILLA SOMALI
Image captionMadaxweyne Farmaajo oo furitaanka safaaradda ka hadlaya
Madaxweyne Farmaajo oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay “in soo dhawaynta Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle loogu sameeyay Muqdisho ay ka tarjumayso wanaagga iyo jacaylka ay Soomaalidu u hayso reer Jabuuti, isaga oo adkeeyay muhiimadda xiriirka walaaltinimo iyo wadashaqaynta labada dal”.
Image captionMadaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo ka hadlaya furitaanka dhismaha cusub ee safaaradda Jabuuti
Madaxweyne Geelle ayaa isna dhankiisa xusay sida uu ugu faraxsan yahay booqashadiisa Muqdisho isaga oo sheegay “inuu miradhalay dadaalkii ka bilawday Carta ee loo galay sidii Soomaaliya ula soo noqon lahayd dowladnimadeeda iyo sharaftii ay caalamka ku lahayd.
“Waxaa qalbigaygu uu la damqanayaa waxa inaga dhexeeya. Dadaalkii labaatan sano ka hor ka soo billawday shirkii Carte ee ahaa inaan ku adkeyno cisigeenna iyo sharafteenna inagoo isku duuban, dunidaan tartan kula geleynaa taas.” ayuu yiri Madaxweyne Ismaaciil.
Image captionMadaxweyne Farmaajo iyo Madaxweyne Geelle
Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa sidoo kale sheegay “inay waajib tahay in la ilaaliyo xornimada ummadeed isaga oo dadka Soomaaliyeed ku bogaadiyay dadaallada ay dhexdooda mar kasta ku xallistaan arrimaha ay isku khilaafsan yihiin, wuxuuna hoosta ka xarriiqay in Dowladda Jabuuti ay ka go’an tahay in Soomaalidu wixii is-faham waa ah ay dhexdeeda kudhammaysato”.
Image captionMadaxweyne Geelle oo booqashada labada maalmood soo gabagabeeyey